Dagaal ka bilowday Tukaraq - WardheerNews
Dagaal ka bilowday Tukaraq
Garoowe (WDN)- Wararka naga soo gaadhaya Garoowe, ayaa sheegaya in iska-horimaad xooggan uu ka dhacay barqadii maanta deegaanka Tukaraq, ee gobolka Sool. Dagaalkaas oo u dhaxeeya ciidamada labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland.
Wali ma cadda khasaaraha uu sababay iska horimaadkaasi, inkasta oo wararku sheegayaan in dhimasho iyo dhaawacba uu sababay.
Iska-horimaadkan ayaa labada maamul midba midka kale ku eedeynayaa mas’uulliyadda dagaalka.
Degaalka ayaa dhacay kadib markii ciidamo ka tirsan Soomaaliland oo ka howl gala aagga deegaanka Tukaraq iyo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay isku dhaceen.
Deegaanka Tukaraq oo horey gacanta ugu jiray maamulka Puntland, ayaa ay kala wareegeen ciidmada Soomaaliland bishii Janaayo ee sanadkan.
Xiisada dagaalka ee labada maamul ayaa aad u kacsan, iyada oo laga cabsi qabo in uu dagaal hor lihi ka dhex dhasho labada maamul ee Puntland iyo Soomaaliland.